3 free ngwọta na-ndabere akwụkwọ ndekọ mfe
Ndabere Blackberry SMS t
3 Free Solutions nkwado ndabere na mpaghara Akwụkwọ ndekọ aha ọtụtụ Mfe
Akwụkwọ ndekọ aha ọtụtụ bụ otu n'ime isi ihe mere anyị niile nwetara a ekwentị. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa na ekwentị n'ihi na ọ nwere kọntaktị. Ndi ana-akpo echekwara na akwụkwọ ndekọ nwere ike ịga na-efu ma site ihichapụ ha ma ọ bụ site adịkwa ekwentị. Akwado gị akwụkwọ ndekọ pụrụ ịbụ nnọọ uru. Dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ ndabere, ị nwere ike mfe nwere ohere kọntaktị gị mgbe adịkwa ha. Akwụkwọ ndekọ aha ọtụtụ ndabere na-eji na- a ọrụ ma ugbu a, e nwere ụzọ dị iche iche ndabere gị akwụkwọ ndekọ. Ị nwere ike mfe bulite akwụkwọ ndekọ email gị ma ọ na-eji ihe ngwa ndabere kọntaktị na SD kaadị, Dropbox, Google ụgbọala wdg
1. Super ndabere
Super ndabere (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idea.backup.smscontacts) ngwa bụ otu nke kasị mma ngwa nkwado ndabere na mpaghara akwụkwọ ndekọ. Ọ kwuru na-abụ ndị kasị ndabere na ngwá ọrụ android. Dị nnọọ ka ọtụtụ ndabere ngwaọrụ, ọ na-akwado ndị ọzọ data ndabere dị ka SMS, Kalinda, wdg O nwere ma free na akwụ ụgwọ nsụgharị na ụgwọ mbipute enye ọzọ atụmatụ karịa free version.
Ndabere kọntaktị, ngwa, ozi, oku na ndekọ, ibe edokọbara wdg ka SD kaadị, Gmail ma ọ bụ Google mbanye.
Ị nwere ike ịtọọ oge akpaka nkwado ndabere na mpaghara ọ ga-akpaghị aka uploaded Gmail ma ọ bụ Google mbanye.
Kama akwado otu mgbe, ị nwere ike họrọ SMS mkparịta ụka ma ọ bụ kọntaktị ị chọrọ ndabere.
Weghachi ihe ọ bụla ị kwadoo ebe mgbe ị chọrọ na mgbe ọ bụla ị chọrọ ya.
App egosiputa mgbasa ozi iji ọrụ na ọrụ mkpa kwalite ka Pro tufuo mgbasa ozi.
2. cm ndabere
Cm ndabere (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ijinshan.kbackup) bụ ka akwụkwọ ndekọ ndabere ngwa na-enye 5GB nke ojii nchekwa maka free. Ọrụ nwere ike ndabere ha data na ha nkesa na nwere ike ịnweta ya n'oge ọ bụla ha chọrọ. Ebe ọ bụ na 5GB bụ nke ukwuu n'ihi na dị nnọọ akwụkwọ ndekọ ndabere, ọ na-akwado SMS, Photos, na ndị ọzọ na backups site na ekwentị gị.
Ndabere ihe niile tinyere kọntaktị gị gụnyere ụbọchị ọmụmụ, wepụtara wdg
Nnọọ ngwa ngwa na nkwado ma weghachite ọsọ.
Na-akwado ala data transfer na nchekwa na Amazon S3 sava.
Cm ndabere na-akwado akpaka ndabere kwa ụbọchị.
Ndabere data nwere ike anya online na weebụ.
Ọ na-ewe nanị otu mgbata nkwado ndabere na mpaghara ọ bụla data na ngwaọrụ gị.
Ọ na-adịghị weghachi ihe niile kwadoo.
3. MC ndabere
MC ndabere (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globile.mycontactbackup) bụ otu n'ime ndị kacha ụzọ nkwado ndabere na mpaghara weghachite akwụkwọ ndekọ. Ọ dịghị achọ ka ihe ọ bụla kọmputa ma ọ bụ mmekọrịta na-arụ ọrụ. Ndabere na-echekwa na .vcf format ma ị nwere ike izigara nkwado ndabere na mpaghara gị email maka mfe ohere mgbe e mesịrị.
MCBackup dịghị mkpa ka mmekọrịta ọ bụla nkesa ndabere kọntaktị gị. Ị nwere ike ndabere kọntaktị gị na mgbe ahụ Email na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ka onwe gị ga-eme n'ọdịnihu ojiji.
Mgbe ọ bụla ị chọrọ weghachite kọntaktị gị, ị na-adịghị mkpa ọ bụla ngwa ime na, dị nnọọ ibudata nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na mbubata na kọntaktị gị.
Nzuzo gị na-ekwe nkwa na MCBackup. Adreesị gị akwụkwọ bụ nchebe na ala na kọntaktị gị gaghị enweta.
Ịtọ oge ndabere-enye gị ohere ndabere kọntaktị kwa izu ma ọ kwa ọnwa.
Ị nwere ike mfe idetuo ndabere site na ekwentị gị na kọmputa gị na-enweghị eji ihe ọ bụla ngwa.
The kasị mma ngwá ọrụ nkwado ndabere na mpaghara na jikwaa gị akwụkwọ ndekọ bụ Wondershare MobileGo. Wondershare MobileGo bụ a ukwuu ike ngwá ọrụ na-enye gị ohere jikwaa na-ejikwa ihe niile na ekwentị gị conveniently site n'otu ebe. Ọ na-akwado ma iOS na Android ngwaọrụ. Ichekwa elu, na-eweghachiri na ijikwa na ekwentị gị akwụkwọ mfe mgbe nile na Wondershare MobileGo n'adịghị ọ bụla ọzọ software.
Atụmatụ nke Wondershare MobileGo
Ọ bụ ngwá ọrụ dị ike na-eme ka ọ dị mfe ibudata, mbubata, bupu ma jikwaa foto gị, videos, music wdg na otu ebe na dị nnọọ a push nke a bọtịnụ.
Ebuli na jikwaa gị mobile mfe na Wondershare MobileGo. Wepụ oyiri kọntaktị, jikwaa gị égwu na nkwado ndabere na mpaghara weghachite ekwentị gị mfe.
Naghachi furu efu faịlụ na ohere zoro na mgbọrọgwụ faịlụ nke ekwentị gị na Wondershare MobileGo.
Agba ọsọ gị ngwa, na-egwu egwuregwu, eziga na-enweta SMS na PC gị na kama nke ekwentị gị na-enweghị ihe mgbochi na Wondershare MobileGo.
Mirror ngwaọrụ gị gị na kọmputa.
3.812.255 ndị ebudatara ya
Import Ndi ana-akpo na Wondershare MobileGo
Na Wondershare MobileGo, ị nwere ike mfe mbubata na mbupu kọntaktị gị. Ị nwere ike idezi, jikota oyiri na kọntaktị na ọbụna ihichapụ kọntaktị.
Jikwaa gị Android kọntaktị na Wondershare MobileGo, na-emeghe Wondershare MobileGo ngwa na kọmputa gị na jikọọ gị Android ekwentị site eriri USB ma ọ Wi-Fi.
Pịa na Ndi ana-akpo taabụ na aka-ekpe-n'akụkụ nke window na-egosi na kọntaktị management window.
Pịa Import, na kọntaktị management window. Ị ga-enweta 5 nhọrọ: si vCard, site Outlook Express, si Windows Live Mail, site Windows Akwụkwọ Adreèsị na site na Outlook.
Họrọ nhọrọ ị na-ahọrọ. Na mmapụta window, họrọ kọntaktị akaụntụ nke nwere ike ịbụ a na kaadị SIM, ekwentị ma ọ bụ Gmail, Facebook, Twitter na ndị ọzọ na akaụntụ.
I nwekwara ike banye na Gmail, Facebook na ndị ọzọ na akaụntụ mbubata kọntaktị site na ọ bụrụ na ị nwere ọ bụla kọntaktị echekwara e.
Mbupụ kọntaktị na Wondershare MobileGo
Pịa Export, na kọntaktị management window. Họrọ niile ma ọ bụ họrọ kọntaktị ị chọrọ mbupụ. Pịa na mbupụ mbupụ kọntaktị gị na kọmputa.
Na dobe ala menu, ị ga-ahụ 6 nhọrọ: ka vCard, ka Outlook Express, ka Windows Live Mail, ka Windows Address Book, ka Outlook 2003/2007/2010/2013 na CSV faịlụ.
Họrọ nhọrọ ị na-ahọrọ na usoro ga-amalite. Ozugbo ọ zuru ezu, pịa OK.
I nwekwara ike mbupụ kọntaktị site Gmail, Facebook na ndị ọzọ na ndekọ ndị dị otú na ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa nanị site na ịbanye na dị ka mkpa.
Top Iri Gospel Artists
Top 5 mere gị mkpa ekwentị ndabere
Ndị kasị mma 2 Music-echekwa maka gị ịzụta music maka Android
Best Nna Kwuru Songs List na 2012
Top 6 ebook nrụọrụ ka Download Free eBooks
> Resource> Top List> 3 free ngwọta na-ndabere akwụkwọ ndekọ mfe